Ịghọta ihe ịma aka (na nkụda mmụọ) nke HTML Email Design | Martech Zone
Ịghọta ihe ịma aka (na nkụda mmụọ) nke HTML Email Design
Wenezdee, Machị 23, 2022 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Mana ndị editọ email nọ n'azụ. Nke a bụ ihe kpatara…
Ịmepụta ozi ịntanetị HTML dị mgbagwoju anya karịa maka weebụsaịtị
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ ezigbo HTML email emebere, usoro a dị mgbagwoju anya karịa ịmepụta ibe weebụ maka ọtụtụ ihe kpatara ya:
Enweghị ụkpụrụ - Enweghị nrube isi na webụ ọ bụla ụkpụrụ site email ahịa na-egosipụta HTML email. N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ahịa email ọ bụla na ụdị ọ bụla nke onye ahịa email ọ bụla eme ihe dị iche iche. Ụfọdụ ga-asọpụrụ CSS, mkpụrụedemede mpụga, na HTML ọgbara ọhụrụ. Ndị ọzọ na-asọpụrụ ụfọdụ ịke inline, ga-egosipụta naanị nchịkọta mkpụrụedemede, ma na-eleghara ihe niile anya ma e wezụga ihe ndị na-adabere na tebụl. Ọ bụ n'ezie nnọọ ihe ọchị n'oge a na ọ dịghị onye na-arụ ọrụ na nke a nke. N'ihi ya, ịmepụta ndebiri nke na-enye ndị ahịa na ngwaọrụ mgbe niile aghọwo nnukwu azụmahịa ma nwee ike ịdị oke ọnụ.
Nchekwa ndị ahịa email - Naanị n'izu a, Apple Mail emelitere iji gbochie ihe oyiyi niile dị na email HTML na ndabara nke na-adịghị etinye na email. Ị na-enye ikike ka ibunye ha email n'otu oge, ma ọ bụ nwee ime ka ntọala ahụ gbanyụọ ntọala a. Tinyere ntọala nche ndị ahịa email, enwekwara ntọala ụlọ ọrụ.
Nchekwa IT - Ndị otu IT gị nwere ike ibunye iwu siri ike maka ihe enwere ike ịsụgharị na email. Ọ bụrụ na onyonyo gị, dịka ọmụmaatụ, sitere na ngalaba akọwapụtara nke na-edoghị akwụkwọ ọcha na firewall ụlọ ọrụ, onyonyo agaghị egosi na email gị. Mgbe ụfọdụ, anyị na-ebupụta ozi-e ma webata foto niile dị na sava ụlọ ọrụ ka ndị ọrụ nke ha nwee ike ịhụ foto a.
Ndị Na-enye Ọrụ Email - Iji mee ka ihe ka njọ, ndị na-ewu email na-enye ọrụ email (ESPs) ewebata nsogbu kama ịmachi ha. Mgbe ha na-akwalite onye nchịkọta akụkọ ha bụ Ihe See Na-ahụ Bụ Ihe You Na-enweta (WYSIWYG), ihe dị iche na-abụkarị eziokwu na imewe email. Ị ga-ahụchalụ ozi-e n'elu ikpo okwu ha, mgbe ahụ, onye nnata email ahụ ga-ahụ ụdị nsogbu niile nke imewe. Ụlọ ọrụ na-amaghị ama na-ahọrọ onye nchịkọta akụkọ bara ọgaranya kama ịbụ onye nchịkọta akụkọ ekpochi na-eche na otu nwere atụmatụ karịa nke ọzọ. Nke dị iche bụ eziokwu… ọ bụrụ na ịchọrọ ozi-e na-enyefe oge niile n'ofe ndị ahịa email niile, ọ ka mma karịa n'ihi na obere nwere ike ịgahie ụzọ.
Ime onye ahịa email - Enwere ọtụtụ narị ndị ahịa email, nke ọ bụla na-enye HTML dị iche iche n'ofe desktọpụ, ngwa, mkpanaka, na ndị ahịa webmail. Mgbe ezigbo ederede ederede na onye na-ahụ maka ọrụ email gị nwere ike ịnwe ntọala iji tinye isi na email gị… padding, margin, line-high, na font-size nwere ike ịdị iche na onye ahịa email ọ bụla. N'ihi ya, ị ga-mgbidi na HTML na koodu ọ bụla mmewere dị iche iche (lee ihe atụ n'okpuru) - na-emekarị dee ewepu na-email ahịa kpọmkwem - iji nweta email na-enye mgbe niile. Enweghị ụdị ngọngọ dị mfe, ị ga-eme nhazi nhazi nke na-adaba na ụlọ maka weebụ afọ iri atọ gara aga. Ọ bụ ya mere nhazi ọhụrụ ọ bụla chọrọ ma mmepe yana ndị ahịa email na nyocha ngwaọrụ. Ihe ị na-ahụ na igbe mbata gị nwere ike ịdị iche iche nke m na-ahụ na igbe mbata m. Ọ bụ ya mere eji arụ ọrụ dị ka Email na Acid or Litmus bụ ihe dị mkpa iji hụ na atụmatụ ọhụrụ gị na-arụ ọrụ n'ofe ndị ahịa email niile. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ndị ahịa email na-ewu ewu na injin nrụpụta ha:
Apple Mail, Outlook maka Mac, Android Mail na iOS Mail iji WebKit.
Outlook 2000, 2002 na 2003 na-eji internet Explorer.
Outlook 2007, 2010 na 2013 na-eji Okwu Microsoft (ee, Okwu!).
Ndị ahịa webụmail na-eji injin ihe nchọgharị ha dị iche iche (dịka ọmụmaatụ, Safari na-eji WebKit na Chrome na-eji Blink).
Ọmụmaatụ HTML maka Weebụ Vs. Email
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma atụ nke na-egosi mgbagwoju anya nke imepụta na email na webụ, nke a bụ ihe atụ zuru oke sitere na akụkọ Mailbakery. 19 Nnukwu Ọdịiche Dị n'etiti Email na Web HTML:
Anyị ga-ewu usoro tebụl nke jikọtara ụdị inline niile dị mkpa iji tinye bọtịnụ ahụ nke ọma wee hụ na ọ dị mma n'ofe ndị ahịa email. A ga-enwekwa mkpado ụdị na-eso ya n'elu email a iji tinye klaasị.
Anyị nwere ike iji ụdị mpempe akwụkwọ mpụga nwere klaasị iji kọwaa ikpe, nhazi, agba na nha mkpado arịlịka nke na-egosi dị ka bọtịnụ.
Otu esi zere nsogbu imewe email
Enwere ike zere nsogbu imewe email site na ịgbaso usoro dị mma:
Nhazi ụkpụrụ - Mepụta ndebiri nwere nhazi dị iche iche na ihe mgbochi ọdịnaya nke gụnyere ụdị ọ bụla ị ga-achọ imepụta na atụmatụ email gị. Mgbe anyị mejuputa onye ahịa, anyị na-agbanye ha mgbe niile chepụta email maka ọdịnihu – Ọ bụghị naanị mkpọsa ozi email na-esote ezipụ. N'ụzọ dị otú ahụ, anyị nwere ike n'ụzọ zuru ezu chepụta, zụlite, nwalee, na mejuputa a ga-arụ ọrụ ndị dị mkpa tupu ha ezipụla email mbụ ahụ.
Nnwale template - Ịghọta ndị ahịa email nke ndị debanyere aha gị na-eji ma hụ na a na-anwale email HTML gị n'ụzọ zuru ezu n'ofe mkpanaka na desktọpụ dị oké mkpa tupu ibunye ụdị ọ bụla. Anyị nwere ike chepụta ozi-e n'ụzọ nkịtị site na nhazi Photoshop… mana slicing na dicing ya n'ime tebụl, onye ahịa ozi-e-mail dị mkpa na-ebuga atụmatụ email nke kachasị mma yana agbanwe agbanwe.
Nnwale ime - Ozugbo emebere template gị ma nwalee ya, ekwesịrị iziga ya na ndepụta mkpụrụ dị n'ime ụlọ ọrụ iji nyochaa ma kwado ya. I nwedịrị ike ịmalite site na obere ndị mmadụ nwere oke iji buru ụzọ hụ na enweghị firewall ma ọ bụ okwu nchekwa metụtara inye email n'ime. Ọ bụrụ na nke a na-ewulite ọmụmaatụ na onye na-eweta ọrụ email ọhụrụ, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ nzacha ma ọ bụ igbochi nsogbu metụtara ọbụna ịnweta email gị na igbe mbata.
Ụdị ụdịdị – Agbanwela gị layouts ma ọ bụ aghụghọ na-enweghị ịrụ ọrụ na a ọhụrụ ụdị gị template nwere ike chepụta, nke ọma nwale, na ibugharị. Ọtụtụ azụmaahịa na-ahụ n'anya na-esetịpụ otu oge maka mkpọsa ọ bụla… mana nke ahụ chọrọ ka emebere email ọ bụla, mepụta ma bufee ya maka mkpọsa ọ bụla. Nke a na-agbakwụnye ọtụtụ oge na usoro ịzụ ahịa email n'ime. Ma, ị nwere ike ghara ịghọta ihe ihe dị na email gị na-arụ ọrụ nke ọma karịa ihe ndị na-abụghị. Nkwenye abụghị naanị ụzọ isi mee ka usoro ahụ dị mfe, ọ dịkwa mkpa maka omume nke ndị debanyere aha gị.
Mwepu ndị na-eweta ọrụ email - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eweta email ọ bụla nwere ụzọ isi rụọ ọrụ na nsogbu ndị na-emepụta email ha na-ewebata. Anyị nwere ike na-agbakwunye raw CSS na akaụntụ - ma ọ bụ ọbụna nwee ngọngọ ọdịnaya nke a ga-etinye na email ọ bụla - ka ụlọ ọrụ ahụ jiri nchịkọta email arụnyere arụnyere ma ghara ime ka ọ mebie nhazi nke email gị. N'ezie, nke ahụ nwere ike ịchọ ụfọdụ ọzụzụ na njikwa usoro iji wepụta usoro ndị ahụ iji hụ na emezuru ha. Ma ọ bụ - ị nwere ike ịchọrọ ịmepụta imewe email gị na ngwọta nke egosipụtara na ọ na-arụ ọrụ n'ofe ndị ahịa na ngwaọrụ, wee madoghachi ya na ndị na-eweta ọrụ email gị.
Ngwa imewe email
N'ihi na nyiwe ọrụ email arụọla ọrụ na-adịghị mma n'ịrụpụta na idowe ndị ahịa ahịa na ngwaọrụ ndị na-ewu ụlọ mgbe niile, ọtụtụ nnukwu nyiwe abatala n'ahịa. Otu anyị ji ọtụtụ ihe bụ Stripo.
Stripo abụghị naanị onye na-ewu email, ha nwekwara ọbá akwụkwọ karịrị ndebiri 900 nke enwere ike ibubata ngwa ngwa. Ozugbo ị chepụtara email ahụ, ị ​​​​nwere ike izipu ozi na 60+ ESPs, yana ndị ahịa email, gụnyere Mailchimp, HubSpot, Mgbasa Ozi Nyochaa, AWeber, eSputnik, Outlook, na Gmail. Nke kacha mma ndebiri Stripo na-abịa yana ule ntinye email gụnyere ka ị nwee ike hụ na anwalela ha ma na-arụ ọrụ mgbe niile n'ofe ndị ahịa email 40.
Nbanye na Stripo Editor ngosi
Nkpughe: Ana m ejikọta na nke m ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịzụ ahịa ahịa onye na-emepụta ma na-ebuga ozi-e ndị ahịa ahịa maka ndị na-eduga ụdị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eweta ọrụ email ọ bụla. Abụkwa m onye mmekọ Stripo na m na-eji njikọ m na edemede a.
Tags: kpuoonye na-ewu emailndị ahịa emailemail imeweemail Marketingozi nsụgharịonye na-eweta ọrụ emailndị na-enye ọrụ emailimewe template emailule ndebiri emailụdị ndebiri emailemail ndebirinyocha emaileditọ ederede emailemail HTMLonye na-eme ntanetịebe a na-eme achịcha mailahia igwe ojiimicrosoft okwustripongwa weebụwebmailnwysiwyg
Ngwa Elfsight: Ecommerce, Ụdị, Ọdịnaya, na Wijetị Ọha na Ọha maka Weebụsaịtị gị.